I-Aluminium Ingxubevange egqityiweyo yokuFikelela ekufeni kukaGuy Grip
I-Aluminium Alloy Preformed Dead End Guy Grip ene-Insulation Coating (SNAL) yokulungisa iitheminali zocingo lomhlaba lwemigca engaphezulu.
I-guy-grip dead clamp end for conductor inokusetyenziselwa ukuthwala ubunzima kwi-bared yentloko okanye i-insulated coors conductor kwi-transmission & distribution lines.
Zizinto zokubambelela kwamasango endalo aswelekileyo anje ngohlobo olubotshiweyo, uhlobo loxinzelelo kunye nohlobo lwe-wedge.
I-aluminium ingxubevange yokuphela kwesiphelo sokubambelela ngentambo yokugquma yekhebula le-telecom, umqhubi we-insulator, intambo yefayibha, intambo yeTV, intambo yedijithali
I-aluminium ingxubevange yokuphela kokuphela kokubambelela nge-insulation yokugquma ineyona nto iphambili ukulungisa ipali / inqaba iintambo, abaqhubi, imicu, izakhiwo
Indawo yeluphu iya kuhlala ikhuselekile ngento efanelekileyo, i-pulley, i-insulator njl njl.
I-Aluminium Alloy Helical Preformed Dead End Guy Grip ene-Insulation Coating (SNAL) yokulungisa iitheminali zocingo lomhlaba lwemigca ephezulu.
Ukubambelela komntu ngaphambili
Isiphelo Dead preformed isetyenziswa ngokubanzi ukufakela ababhexeshi ze okanye ngaphezulu ezigqunyiweyo izinikezeli zokuhambisa kunye nolwabiwo imigca, ukuthembeka kunye nokusebenza kwezoqoqosho imveliso kungcono ngaphezu uhlobo evulwa kunye hydraulic uhlobo ingcinezelo uqinisa ezisetyenziswa ngokubanzi kwisekethe yangoku. Esi sisiphelo, esinye sesahlulo sokugqibela esicocekileyo sibonakala sicocekile kwaye sikhululekile kwiibholiti okanye kwizixhobo ezibambe uxinzelelo oluphezulu. Inokwenziwa ngesinyithi esenziwe ngesinyithi okanye ialuminiyam enxibe isinyithi.
Izinto zangaphambili zomgca: IAluminiyam inxibe ucingo lwentsimbi
Izikrweqe zangaphakathi, iintonga zangaphandle zesikrweqe, i-thimble, iluphu ejingiske njenge-U, iluphu yolwandiso, ibhawudo, nut, njl.
1. Uxinzelelo lusasazwa ngokulinganayo, ngaphandle koxinzelelo. Inokuzikhusela kakuhle iintambo ezibonakalayo.
2. Phantsi kwemeko yokungadluli kubunzulu boxinzelelo lwecala lekhebula, inamandla amakhulu okubamba intambo, kwaye inokuxhasa ukuqina okuphezulu.
3. Amandla okubamba intambo ayikho ngaphantsi kwe-95% yomyinge wokutsala uxhathiso lwentambo ebonakalayo, ukwanelisa ngokupheleleyo iimfuno zokumisela intambo.
Ukubanjwa kwangaphambili komntu oswelekileyo
Ucingo lomhlaba lomqhubi wentsimbi; ucingo uqinisa isetyenziselwa intsimbi kwalenza.
I-Aluminium-egqoke isinyithi, i-ACSR eqhuba kakuhle, intambo yocingo isetyenziselwa i-aluminium-clad steel wir
UKULUNGISELELA UKUSETYENZISWA KWESIPHELO SOKUFA
Ingqinamba yeTension eyenziweyo yenzelwe ukuqhagamshela iintambo ze-ADSS kunye neepali / iinqaba. Izikrweqe zezixhobo zinokubonelela ngokhuseleko kunye nokuqinisa kwiintambo ze-ADSS. Uyilo olukhethekileyo lweentonga ze-Preformed luqinisekisa ukuba i-Tension Clamps ayinakubangela uxinzelelo olungafunekiyo kwiintambo ze-ADSS, ukuze kuqinisekiswe ixesha eliqhelekileyo lokuphila kwenkqubo yeentambo.
I-Tension Clamp yenzelwe ukudibanisa iintambo ze-OPGW kunye nezibonda eziqinileyo (okanye iinqaba). Izikrweqe zezixhobo zingakhusela kwaye zibonelele ngokuqiniswa kwiintambo ze-OPGW. Uyilo olukhethekileyo lweentonga zeArmor luqinisekisa ukuba i-Tension Clamps ayinakubangela uxinzelelo olungeyomfuneko kwiintambo ze-OPGW, ukuze ixesha eliqhelekileyo lokuphila kwenkqubo yentambo liqinisekiswe.
Isetyenziselwa uqhagamshelo lwesebe lweentambo ezifakelweyo ekwakheni iinkqubo zokuhambisa umbane, uqhagamshelo lweentambo ezifakelwe i-voltage esezantsi, uqhagamshelo lwesebe lweentambo zekhaya ezifakwe ngombane ophantsi, kunye neenkqubo zokuhambisa umbane wesitrato.
Iseti yoxinzelelo lwangaphambili isetyenziswa ngokubanzi ukufakela abaqhubi abangenanto okanye ngaphezulu ii-insured conductor zokuhambisa kunye nokuhambisa imigca, ukuthembeka kunye nokusebenza koqoqosho kwemveliso kungcono kunohlobo lwe-bolt kunye ne-hydraulic type tension clamp esetyenziswa kakhulu kwisekethe yangoku.
Ubume bokuyila kunye noyilo oluchanekileyo, ukwenzela ukuba iseti yoxinzelelo lwangaphambili lube nokusebenza okuthembekileyo kwaye ihlala yenziwe ngealuminiyam enxibe isinyithi, ucingo lwesinyithi kunye nezinye izinto.
Izibophelelo zoxinzelelo zenzelwe ukudibanisa iintambo ze-ADSS kunye neepali / iinqaba. Izikrweqe zezixhobo zinokubonelela ngokhuseleko kunye nokuqinisa kwiintambo ze-ADSS. Uyilo olukhethekileyo lweentonga ze-Preformed luqinisekisa ukuba i-Tension Clamps ayinakubangela uxinzelelo olungafunekiyo kwiintambo ze-ADSS, ukuze kuqinisekiswe ixesha eliqhelekileyo lokuphila kwenkqubo yeentambo.
Izinto zangaphambili zomgca: I-Aluminium enxibe ucingo lwentsimbi okanye ucingo lwentsimbi olwenziweyo.